Faah Faahin: Ciidamo Itoobiyaan Ah oo Gobolka Mudug ku laayay Maleeshiyaad Katirsan Maamulka 'Puntland'
Daawo: Al-kataa'ib Oo Filim Cusub Soo Saartay Waa Tartanka 30-ka Juz Quraanka Ee Wilaayaatka Islaamiga Ah.
Thursday December 29, 2016 - 08:02:42 in Wararka by
Ugu yaraan Afar Askari oo katirsan ciidamada maamulka isku magacaabay 'Punland' ayaa dhimatay sedax kalane dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii weerar lagu qaaday deegaan ay ku sugnaayeen gobolka Mudug.
Maleeshiyaadka Liyuu Boolis ayaa xasuuq ugeystay shacab Rayid ah
Wararka ka imaanaya bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Dowladda Itoobiya ay kasoo gudbeen xadbeenaadka islamarkaana ay toogasho ku dileen maleeshiyaad katirsan maamulka ‘Puntland’.
Mas’uuliyiin katirsan maamulka gobolka Mudug ee dhanka ‘Puntland’ ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada Itoobiya ay weerar hubeysan ku qaadeen deegaanka Dudun oo dhanka galbeed uga beegan magaalada Gaalkacyo islamarkaanka ay halkaasi ka geysteen dhimasho iyo dhaawac.
Dad Goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka Itoobiya ee loo yaqaan Liyuu Booliska ay dileen Afar Askari oo Soomaali ah kadib markii ay weerareen Bar koontarool oo kaabiga ku haysa xadbeenaadka ay wadaagaan dhulka Somaligalbeed ee gumeysiga kujira iyo gobolka Mudug.
Itoobiyaanka ay la wareegay lacago malaayiin shilin soomaali ah iyo dhammaan hubkii ay wateen ciidamadii ladilay.
Mid kamida waxgaradka Mudug ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka Itoobiya ay ka caroodeen socdaal uu guddoomiyaha Mudug ku tagay deegaanka Dundun iyo dhagax dhig uu ku sameeyay isbitaal iyo ceel biyood halkaasi laga hirgelinayo kadibna ay sidaas weerarka usoo qaadeen.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidanka Liyuu Booliska ay wali ku suganyihiin deegaanka halka ciidamadii ‘Puntland’ ee badbaaday ay u firxadeen dhanka waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Ciidamada Itoobiya ayaa bilo ka hor xasuuq daran ka geystay deegaano katirsan gobollada Togdheer, Galguduud iyo Mudug oo dhammaantood ay ka jiraan maamullo dabadhilifyo u ah xukuumadda Addis Ababa balse dhacdada deegaanka Dududn ka dhacay ayaa ah middii ugu horraysay oo Itoobiyaanku ku dilaan Maleeshiyaad iyaga wadashaqeyn laleh.
Gumeysiga Itoobiya ayaan kala jeclayn midka isaga dabadhilifka u ah ee la shaqeeya iyo kuwa kasoo horjeeda iyadoona Xabashidu ay cadaw ka aaminsantahay dhammaan dadka Soomaalida oo colaad soo jireen ah kala dhaxayso.